Thursday, 21 June 2012 16:07	नागरिक
किशोर नेपाल- स्वयम्भूको डाँडाबाट कान्तिपुर शहरलाई आँखामा डुबायो भने के के देखिन्छ? रायनाले अहिलेसम्म यो कुरा सोचेकी थिइन। स्वयम्भूकै मन्दिरमा पुगेर हेर्दा भने उसले विशेष केही देखिन। कान्तिपुर शहर धमिलो थियो। बिहानैदेखि टन्टलापुर घाममा टल्किएर सखाप भएको थियो शहर। बच्चा छँदा उसलाई सिपाहीको बुइ चढेर सरस्वतीको दर्शन गराउन ल्याइन्थ्यो। साथमा उसका बाबा र मुवा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला उसको आँखाको नानी सारै सानो थियो। तैपनि कान्तिपुरमा फैलिएका विशाल फाँटहरू उसको स्मृतिमा अड्किएर रहेका छन्। त्यतिबेलाको कान्तिपुर यसरी घरहरूमा फैलिएको पनि थिएन।
उमेर खाएपछि भने रायना स्वयम्भू कहिल्यै आइन। कलिलो उमेरका प्रेमीहरूको पपुलर लभ स्पट भए पनि उसका प्रेमीहरूले उसलाई कहिल्यै स्वयम्भू जाने प्रस्ताव नै गरेनन्। उमेर छिप्पिएपछि शहरका बारमा केटाहरू र टकिलासँग छिल्लिने रोगले समात्यो प्रेमलाई। प्रेम पनि पो अद्भूत। रायनाले कति जना केटासँग कुन-कुन परिस्थितिमा कसरी प्रेम गरी, त्यो उसैलाई थाहा छैन।
आज बिहानै ऊ स्वयम्भू आएकी हो। विनिताले स्वयम्भूको सौन्दर्यशास्त्रको वर्णन गर्दै बताएकी थिई, कान्तिपुरमा बसेर स्वयम्भूको जिओग्राफी थाहा नपाउनेले के बस्नु कान्तिपुरमा? स्वयम्भूको परिसर आफैँमा रमाइलो थियो। तर, त्यहाँबाट रायनाका आ"खा धेरै परसम्म तन्किन सकेनन्।
स्वयम्भूको सिँढी उक्लिँदा रायनाको शरीर निकै गलेको थियो। उसलाई थकाइ लागेको त होइन। तैपनि, कुन्नि के भएको हो! केही समयदेखि उसलाई यस्तै हुने गरेको छ। चुरोट धेरै तान्नेलाई यस्तै हुन्छ भन्छन्। उसलाई पनि यो कुरा हो जस्तो लाग्न थालेको छ। कहिलेकाहीँ त अफिसको भर्‍याङ चढ्न पनि गाह्रो लाग्छ उसलाई। उचाइसँग उसलाई डर लाग्ने त होइन। तैपनि, उचाइलाई अभोइड गर्ने चाहनाले पिरोल्न थालेको छ, उसलाई।
स्वयम्भूबाट ओर्लिँदा रायनाको मन आवारा भएको थियो। उसले सुनेकी थिई, हात्तीवन रिसोर्टबाट पूरै कान्तिपुर उज्यालोमा गमक्क गम्केको देखिन्छ। उसलाई आज एक रात त्यहाँ बिताऊँ बिताऊँ जस्तो लाग्यो। उसले अछामीलाई फोन गरी। अछामी कान्तिपुर आएको थियो, महिना दिनको काजमा। उसले रायनाको प्रस्तावलाई तुरुन्तै स्वीकार गर्‍यो। रायना खुशीले गद्गदाई। अछामी रायनाको प्रस्तावले नै रोमाञ्चित भैसकेको थियो।
स्वयम्भूबाट हात्तीवन। रायना सपनाहरू बोकेर घर पुगी। ब्युटी किट्स, हट प्यान्ट, टिसर्ट र रिबकको जुत्तामा सजिएर अछामीको प्रतीक्षामा बसी। एकैछिनपछि हर्न बज्यो। अछामी बाहिर टेरिअस जिपमा पर्खिरहेको थियो। समर ट्युनिङमा ऊ बडो आकर्षक देखिइरहेको थियो। रायना जिपमा चढी र बडो फिल्मी स्टाइलमा उसको गालामा चुम्बन गरी। रायनाको ओठको छाप अछामीको गोरो गालामा बस्यो थुपुक्क। उसले फ्रन्ट मिररमा हेर्‍यो। गालामा बसेको ओठको त्यो छाप उसलाई निकै सुन्दर लाग्यो। उसले त्यसलाई मेटेन। बस, रायनातिर फर्कियो र मुसुक्क हाँस्यो।
उनीहरू चाल्नाखेल कटिसकेका थिए। अछामीले रिसोर्टवालालाई फोन गरेर कोठा बुक गराइसकेकोले झन्झट केही थिएन। उनीहरू पुग्दा सूर्य पहेलिँदै थियो। कोठामा पुगेर सेटल गर्नेबित्तिकै अछामीले गाँजिहाल्यो रायनालाई। उसको गालामा रायनाको ओठको छाप मेटिएको थिएन।
'लभ यू,' दुवै भावनाको प्रवाहमा बहकिएका थिए। धेरै बेरपछि उत्तेजना शान्त पारेर कोठाबाट निस्कँदा उनीहरू बाहिरको दृश्य देखेर अवाक् भएका थिए। कान्तिपुर साँच्चै रोचक थियो र जगमगाएको थियो। लोडसेडिङ नभइदिएको भए यो खाल्डो अझ कति जगमग देखिन्थ्यो होला। तर, कान्तिपुर दुर्भाग्यहरूका बीचमा बा"चेको एउटा यस्तो शहर हो, जसको इतिहास लुकाउन खोजिएको छ। रायनाले सोची, 'धनी देशहरूले शहरको यो सेटिङ पाएका भए कस्तो हुन्थ्यो!'